Pyae Phyo (MMiTD): ♪ တရားဝင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Google ရဲ့ Pixel နဲ့ Pixel XL ဖုန်းအသစ်နှစ်မျိုး ♫
♪ တရားဝင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Google ရဲ့ Pixel နဲ့ Pixel XL ဖုန်းအသစ်နှစ်မျိုး ♫
Google ဟာ မနေ့ညက ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပွဲမှာ Android ပရိတ်သတ်တွေအားလုံး စောင့်မျှော်နေခဲ့တဲ့ Pixel ဖုန်းအသစ်တွေကို စတင်မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။
Pixel နဲ့ Pixel XL လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ Google စမတ်ဖုန်းအသစ်နှစ်မျိုးကို အရင် Nexus ဖုန်းတွေလို တခြားကုမ္ပဏီက ဟာ့ဒ်ဝဲပိုင်းတာဝန်ယူထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲ၊ Google ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင် (FCC) က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေအရတော့၊ ဒီဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးကို HTC ကုမ္ပဏီကပဲ ထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
HTC က ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တာကြောင့် ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ HTC A9 နဲ့ HTC Desire 10 တို့နဲ့ တော်တော်ဆင်နေပါတယ်။ အဆိုပါ HTC ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးကလည်း iPhone နဲ့ ဆင်တာကြောင့် ဒီဇိုင်းကတော့ ထူးခြားမှုသိပ်မရှိဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဖုန်းရဲ့ ကျောဘက်ကို ဖန်နဲ့ သတ္တုရောစပ်အသုံးပြုထားပြီး၊ လက်ဗွေရာဆန်ဆာက ဖုန်းကျောဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘G’ ဆိုတဲံ Google လိုဂိုတစ်ခုကိုပဲ ကျောဘက်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရ ပါတယ်။ ကျောကင်မရာကလည်း အပြင်ကို ဖောင်းထွက်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ထည်နဲ့ တသားတည်းပါပဲ။
Pixel နဲ့ Pixel XL ဖုန်းနှစ်မျိုးမှာ အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ စခရင်အရွယ်အစားနဲ့ ဘက်ထရီပမာဏဖြစ်ပြီး၊ ‘Pixel’ ဖုန်းက မျက်နှာပြင် ၅ လက်မအကျယ် 1920×1080 pixels AMOLED display နဲ့ဖြစ်ကာ၊ Pixel XL ဖုန်းကတော့ ၅.၅ လက်မအကျယ် 2560×1440 AMOLED display နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီမှာတော့ Pixel ဖုန်းက 2770mAh ဘက်ထရီဖြစ်ကာ၊ Pixel XL ကတော့ 3450mAh ဘက်ထရီသုံးထားပါတယ်။
Pixel နဲ့ Pixel XL ဖုန်းရဲ့ နောက်တစ်ခုထူးခြားချက်တော့ Qualcomm ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Snapdragon 821 SoC အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်တွင်းမှာ Snapdragon 821 SoC သုံးက သိပ်မရှိသေးတာပါဘူး။
ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးမှာ RAM က 4GG LPDDR4 RAM ၊၊ ဖုန်းတွင်း storage က 32 GB နဲ့ 128GB နှစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ 64GB မော်ဒယ် မထုတ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးမှာ အဓိကထူးခြားတာကတော့ ကင်မရာလို့ပဲ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး၊ Google ဟာ ဖုန်းကင်မရာအကြောင်းကိုပဲ ပွဲမှာ အချိန်ပေးပြောသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Pixel ဖုန်းရဲ့ ကျောကင်မရာက 12.3MP ၊ f/2.0 ဆန်ဆာနဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ကင်မရာအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုဆော့ဖ်ဝဲ DxOMark နဲ့ စစ်ဆေးရာမှာ ရမှတ် ၈၉ မှတ်အထိ ရရှိထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ( ဒီရမှတ်ဟာ စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေထဲမှာ အများဆုံးရမှတ်ပဲလို့ Google က ဂုဏ်ယူစွာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။) Pixel ဖုန်းက ကင်မရာကောင်းကောင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံစိတ်ကြိုက်ရိုက်ဖို့အတွက် Google Photos app ကနေ storage အကန့်အသတ်မရှိ ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရာမှာလည်း 4K ဗီဒီယိုတွေကို 30FPS နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ Google က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Pixel ဖုန်းတွေဟာ Google ရဲ့ ‘Daydream VR’ platform အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်သလို၊ Google ရဲ့ မကြာခင်ထွက်ရှိမယ့် Assistant AI ပါဝင်မယ့် ပထမဆုံးဖုန်းတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ့အပြင် iPhone အသုံးပြုသူတွေကို Android ဘက်ရောက်လာအောင် ဆွဲခေါ်ဖို့အတွက်လည်း ဖုန်းအဟောင်းက ဒေတာတွေကို ဒီဖုန်းဆီ အမြန်ဆုံးလွဲပြောင်းနိုင်မယ့် Quick Switch ဆိုတဲ့ adapter လေးကိုလည်း ဗူးထဲမှာ တပါတည်းထည့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။
USB Type-C သုံးဖြစ်ကာ၊ 3.5mm headphone jack ကိုလည်း သုံးနိုင်ဦးမှာပါ။
ဈေးနှုန်းတွေကတော့ ၅ လက်မအကျယ် 32GB Pixel ဖုန်းကို ၆၄၉ ဒေါ်လာကနေ စပြီး၊ 128GB မော်ဒယ်က ၇၄၉ ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ Pixel XL မှာတော့ 32GB မော်ဒယ်က ၇၆၉ ဒေါ်လာဖြစ်ကာ၊ 128GB ကတော့ ၈၆၉ ဒေါ်လာပါ။
အရောင်အနေနဲ့ အနက်နဲ့ ငွေရောင်နှစ်မျိုးပဲ အဓိကထုတ်မှာဖြစ်ကာ၊ US က Verizon သုံးသူတွေအတွက် “Really Blue” ဆိုတဲံအပြာရောင်မော်ဒယ် သက်သက်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယနေ့ပဲ ကြိုတင်အော်ဒါမှာယူနိုင်ပါပြီ။
▼ October ( 423 )
♪ အပစ်အခတ်နဲ့ ကွန်မန်ဒိုစစ်ဆင်ရေးဂိမ်း - Special F...
♪ " MyTelenor App မှတဆင့် တယ်လီနောဆင်းကတ်များကို မ...
♪ " Huawei P9 (Rose Gold) " ♫
♪ " Samsung Galaxy J3 (2016) " ♫
♪ “Meizu MX6” ♫
♪ “အကောင်းဆုံး အခမဲ့ Android VPNs” ♫
♪ Android စမတ်ဖုန်းများအတွက် Gapps အလွယ်ဆုံးထည့်နု...
♪ iPhone ကိုမြန်မာပြည်အတွက် Authorised Distributor...
♪ ဈေးကွက်တွင်းဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ RAM 6GB ပါ Andr...
♪ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိမယ်လို့ သတင်းထွက...
♪ OLED ‘Touch Bar’ နဲ့ Touch ID တို့ ပါဝင်လာတဲ့ Ma...
♪ လာမယ့်နှစ်အတွင်း ထွက်ရှိမယ့် စမတ်ဖုန်းနဲ့ လက်ပ်ေ...
♪ တယ်လီနော ရဲ့ iPhone7နှင့် iPhone7Plus အစီအစဥ...
♪ “ZTE က Nubia Z11 mini S ကိုမိတ်ဆက်” ♫
♪ “Huawei က Media Pad2ကိုမိတ်ဆက်” ♫
♪ “KENBO O31 Plus” ♫
♪ “Samsung Note7User များ iPhone7ပြောင်းသုံးမည...
♪ “Power Tips For iPhone 7” ♫
♪ “Account ခွဲများစွာ အပြိုင်သုံးလိုသည့်အခါ” ♫
YouTube မှ Music Video များကို MP3 အဖြစ်ပြောင်းပေး...
MPT 4G ၀န်ဆောင်မှုမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ မီဒီယ...
♪ လာမည့်နှစ်တွင် Apple က iPhone သုံးမျိုး မိတ်ဆက်မ...
♪ ဖုန်းထဲမှာ Window 10 Style နဲ့လန်းချင်သူများအတွက...
♪ Xiaomi ရဲ့ အခန့်ညားဆုံး Concept ဖုန်းတစ်ခု (သို့...
♪ ဘယ်ဖုန်းမှာမှ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ ခရမ်းနုရောင် ဒီဇိုင...
MIUI 8 မှာ screenshot အရှည် ဘယ်လိုရိုက်မလဲ
Play Store က မဟုတ်တဲ့ Android apps တွေကို အလွယ်ကူဆ...
♪ Player တွေကိုပြန်လည်ဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ Pokemon Go ...
♪ Android User တွေ Whatsapp နဲ့ Video Call စမ်းသပ်...
♪ Linux ကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် “Linux Foundation”...
♪ MPT အလုပ်အကိုင်ပြပွဲ ကျင်းပမည် ♫
♪ လုပ်ဆောင်ချက် အကောင်းဆုံးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ M...
♪ Billboard ကို Hack ပြီး ညစ်ညမ်းကား ပြသူ ဖမ်းခံရ ...
♪ “ အမေးများသော မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ " ...
♪ “HTC One ME” ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များ ♫
သင့် iPhone ကို ပျက်စီးအောင် လုပ်နေမိတဲ့ အချက် (၅)...
ဗော်လဂါမှ ဂင်္ဂါသို့ - ဆန်းထွန်း(တက္ကသိုလ်)
♪ ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအထူကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ အာမခ...
♪ စမတ်​ဖုန်းကိုသုံးပြီိး သင့်​ရဲ့ ကွန်​ပျူတာကိုဘယ...
♪ MI Note Account Lock Remove 100% ♫
♪ CoC Halloween version ♫
♪ ဘောင်ပျောက် display ပါဝင်သော MIX စမတ်ဖုန်းကို X...
♪ Dual-edge curved display နှင့် Snapdragon 821 ပါ...
♪ LG K10 LTE ရဲ့ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက် နှင့် သုံ...
♪ " Huawei Honor Note 8 VS Xiaomi Mi 5s Plus " ♫
♪ “အနာဂတ်မှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာသုံးရမည့် AI နည်းပည...
♪ KBZ ဘဏ်မှ UnionPay အကြွေးဝယ်ကတ်များ မိတ်ဆက် ♫
♪ Facebook မှ ဗီဒီယိုများရဲ့ Default Quality ကို သ...
♪ တခြားသူမသိ​အောင်​ ဗွီဒီယို ခိုးရိုက်​ချင်​သူများ...
♪ Facebook က Page များအတွက် Live Video များကို Sch...
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ Secret Conversation messenger ဖန်တီြး...
♪ Google Assistant ကို အရင် Nexus နဲ့ တခြား Androi...
ဖုန်းနှင့် လုပ်စားနေတဲ့သူများအတွက်ရှိသင်တိုက်တဲ့ -...
♪ Note7ကို အခြား Samsung Phone နဲ့ လဲရင် ဒေါ်လာ ၁...
♪ ဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုပေါ့ပါးမြန်ဆန်လာအောင် Maintenan...
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-76 (24.10.16) ♫...
♪ မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်သည့်အတတ်ပညာဆိုတာ ♫
♪ iMusic Free MP3 Downloader ♫
♪ " Recycle Bin အကြောင်း သိကောင်းစရာ " ဆောင်းပါးရ...
♪ " Asus Zenfone Selfie " Price - 299,000 Ks ♫
♪ " ZTE Blade A711 " Price - 239,000 Ks ♫
♪ “Zenfone3- Built For Photography” ♫
♪ “Xiaomi Mi 5” ♫
ဒီနေ့ထွက် - Facebook Messenger နှင့် Facebook new ...
♪ “HP က Spectre x360 Model အသစ်ကိုမိတ်ဆက်” ♫
♪ “Samsung Galaxy J7 Prime” ♫
♪ Windows & Office Activator (25) မျိုး [For Windo...
♪ Facebook Skype Twitter Gtalk အားလုံးကိုတစ်နေရာထဲ...
♪ Root မလိုပဲ မြန်မာစာ အမှန်ပေါ်စေမယ့် - iFont (Exp...
♪ “Android ဖုန်းရှိရင် ဒါတွေရှိသင့်တယ်” ♫
♪ “Google Pixels XL” ♫
♪ Facebook က ဗီဒီယိုတွေကို ဖုန်းကနေ ဒေါင်းမယ် ♫
♪ Google Pixel XL နဲ့ Samaung Galaxy S7 Edge တို့ရ...
♪ USB OTG ဆိုတာဘာလဲ . . . ? ဘယ်လို အသုံးဝင်တာလဲ . ...
♪ Mi Note2မှာ Curved Display ကိုအသုံးပြုထားကြောင...
♪ အူရီဒူးမြန်မာမှ Smart 12 series 4G ဟန်းဆက်များကိ...
ဖုန်းမှန်ပေါ်က အစင်းရာတွေကို လုံးဝဖျောက်ပစ်နိုင်မယ်...
Odin3_v3.11.3 latest download
♪ Samsung ဖုန်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံး RAM 6GB ပါဝင်တဲ့ G...
♪ “Sony Xperia XZ (F8332)” ♫
ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုEffect ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ...
ဖုန်းထဲကနေ တရားတော်များကိုနားကြားကြမယ် New Version...
♪ Google Pixel ဟာ အကောင်းဆုံး Android ဖုန်းတစ်လုံး...
♪ သင့်ရဲ့ iPhone အဟောင်းက အချက်အလက်တွေကို iPhone အ...
♪ Telenor All in One Application ♫
Mobile Service သမားများအတွက် ရှားပါး Firmware နဲ့ ...
ဖုန်းတွေထဲကို Antivirus ဝင်မရအောင် လုံးခြုံစေမယ် -...
♪ “Asus Zenfone3Laser ကိုအိန္ဒိယမှာရောင်းချ” ♫
♪ “Xiaomi က အိန္ဒိယမှာ Mi Max Prime ကိုရောင်းမည်” ♫...
♪ “KENBO E81” ♫
♪ “Anti-virus ဒုက္ခပေးသည့်အခါ” ♫
♪ Evernote အတွက် Tips and Tricks များ ( အပိုင်း ၁ ...
♪ လုံခြုံရေးအထောက်အထားပြသမှုမှာ Password တွေရဲ့ နေရ...
♪ GTX 1080 နဲ့ Mechanical Keyboard တို့ ပါဝင်တဲ့ ၃...
♪ Kodak က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ 21MP ကျောကင်မရာပါ စွမ်း...
♪ Ooredoo Myanmar မှ သုံးစွဲသူများအတွက် ကမ္ဘာကျော် ...